Hogaamiyaha Alshabaab Abuu Zubeyr oo soo diray Cajalad maqal ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hogaamiyaha Alshabaab Abuu Zubeyr oo soo diray Cajalad maqal ah
Muqdisho – Mareeg.com: Idaacadda Al-andalus ee Alshabaab leeyihiin ayaa bogga ay ku leedahay Facebook ku qortay in caawa marka saacadda Afrikada Bari tahay 9:00 fiidnimo la sii deyn doono cod uu soo diray hogaamiyaha Alshabaab, Sheekh Mukhtaar Abuu Zubeyr oo magaciisa saxda ah lagu sheego Axmed Cabdi Godane.
Cajaladda ayaa la sheegay in hogaamiyaha Alshabaab uga hadlayo arrimo dhowr ah, iyadoo Alshabaaab maalmihii lasoo dhaafay wajahayeen weerar dhinacyo badan oo ay hogaaminayaan ciidamada Itoobiya.
Hogaamiyaha Alshabaab ayaa inta badan cod soo diro marka ay jiraan arrimo saameyn xoogan ku leh Alshabaab, waxaana cajalkaan kusoo beegmayaa xilli maanta madaxa AMISOM Danjire Mohamet Salled Annadif uu shaaciyey inuu bilowday dagaal ka dhan ah Alshabaab oo looga saarayo deegaanada ay maamulaan.
Ilaa hadda waxaa dagaalka u dhaxeeya ciidamada AMISOM ee Itoobiya ka socda iyo Alshabaab ka socda gobollada Bakool iyo gedo iyo ilaa 3 degmo laga saaray Alshabaab.
Gedo: Degmada Buurdhuubo oo ka baxday gacanta Alshabaab